Kungani Ngisebenza mahhala futhi uWil Wheaton Kungenzeka Angalungile | Martech Zone
Kungani Ngisebenza mahhala futhi uWil Wheaton Kungenzeka Angalungile
NgoMgqibelo, Okthoba 31, 2015 NgoLwesibili, Novemba 3, 2015 Douglas Karr
Lokhu okuthunyelwe akuyona impikiswano, futhi angizami ukuqala impikiswano noWil Wheaton nokuthunyelwe kwakhe, awukwazi ukukhokha intela yakho ngeplatifomu eyingqayizivele futhi ufinyelele kusayithi lethu. UWil Wheaton ngumkhiqizo osungulwe ngokulandela okubalulekile. Usebenze kanzima ukuthuthukisa izethameli zakhe nomphakathi - yingakho ukukhala nokuvumelana nesimo sakhe.
UWil Wheaton wayenenhlonipho empendulweni yakhe. Wayekhaliphile futhi nokukwenza esidlangalaleni… eqhubeka ububi, ubungxiwankulu obuxhaphazayo kulezi zinsuku konke ukufutheka. Kepha iningi lethu aliyona uWil Wheaton. Iningi lethu lizama ukukhulisa ukufinyelela kwethu nezithameli futhi sizimisele ukutshala imali ekwenzeni lokho. Amathuba okufinyelela izithameli njengeHuffPo bekulokhu, Empeleni, utshalomali. Esikhundleni sokukhokhela ukukhangisa, izindleko ukunikela ngamathalenta akho athile.
Ake siqale sixoxe ngaleso silwane esikhulu, sonxiwankulu esibizwa ngeHuffington Post. Martech Zone iyaqhubeka nokukhula kwamadijithi amabili unyaka nonyaka. Ngemuva kweminyaka eyishumi iku-inthanethi, ibhulogi iyaqhubeka nokuheha amaklayenti amahle kwi-ejensi yethu, Highbridge. Ukukhula kwemali ngqo kuqondile, kepha uJenn (engisebenza naye ebhizinisini) futhi siyazi ukuthi kufanele siqhubeke nokutshala imali kubhulogi ukuhlinzeka ngemali engenayo engaholela ekwenzeni inzuzo ngokushicilelwa.
Lapho ukushicilelwa kufinyelela enzuzweni enkulu (ngaphandle komsebenzi we-ejensi), abantu bangaphendula ngendlela efanayo kithi maqondana nababhali babavakashi nokuqukethwe okuthunyelwe. Sishicilela okuthunyelwe okumbalwa isonto ngalinye kusuka kuzivakashi lapho sikholelwa ukuthi izilaleli zethu zizozuza kokuqukethwe. Asizinxephezeli lezo zinkampani noma abantu, noma.
Asibanxephezeli ababhali babavakashi (okwamanje) ngoba sitshale imali engaphezu kweyishumi ekukhuliseni izithameli zethu. Ngitshala okungenani ikota yesikhathi sami njalo ngesonto ezindaweni zokufunda, ukuxhumana nezinkampani, ukuhlola amapulatifomu, ukwenza ama-podcast, ukukhulisa uhlelo lwethu lwamavidiyo, ukufunda izincwadi, ukuya emicimbini nokukhokhela amapulatifomu asekela ukushicilelwa kwethu. Ngiyesaba ukucabanga ukuthi leso sikhathi sibaluleke ngani… Ngiyasazisa ezigidini. Angikwazanga ukukhokha intela yami ngalolo tshalomali, noma!
Ngabe uWil Wheaton ukwazile ukukhokha intela ngeposi lakhe le-blog mayelana neHuffington Post? Angikholwa kanjalo.
Izithameli zethu zibalulekile. Sikhokhele lokho kufinyelela ezinkulungwaneni zamahora nezinkulungwane zamaRandi ekutshalweni kwemali ngqo nasekukhuthazeni. Ukukhokhwa kwababhali bethu babavakashi kuza ethubeni lokwakha igunya labo nezithameli zethu futhi kubakhange ukuthi bazibandakanye nabo ngezizathu zebhizinisi. Izinkampani ezitshale imali ekubhaleni okuqukethwe okuhle nathi sezibonile ngokungaqondile imali evela kulokho okuthunyelwe. Ngakho-ke, yize ngingakabakhokheleli okuqukethwe, izilaleli zethu zinakho
Kulabo bethu abadumile futhi abaqhubeka nokusebenza kanzima ukukhulisa igunya lethu futhi bafinyelele ku-intanethi, ithuba lokufinyelela nokuheha izethameli omunye umuntu aqhubeka nokutshala imali kuyithuba elihle kakhulu. Angikholwa ukuthi ukuxhashazwa nhlobo… kuyithuba elihlomulisa bonke lapho kungaxoxiswana ngezinzuzo.
Iqiniso ukuthi uchwepheshe we-PR ofinyelele kuWil Wheaton wakhokhelwa. Ngakho-ke uHuffPo usebenzisa imali ukucela osaziwayo abanjengaye. Ngikholwa ukuthi uMnu. Wheaton kungenzeka ukuthi wakwazi ukuxoxisana ngesivumelwano lapho ayezosizakala khona - ngqo nangokungaqondile. Nazi izindlela ezimbalwa:
Ukukhuthaza Incwadi - UMnu Wheaton ungumbhali onekhono. Mhlawumbe ubengaxoxisana ngokunyuselwa mahhala kwencwadi yakhe kuzithameli eziningi zeHuffington Post. Bekungenziwa ngokubizelwa esenzweni esifanele kwezinye izigaba noma izihloko, noma ngisho nokucela ukuthi iHuffington Post ibukeze izincwadi kwezohwebo. Lokho kungaholela ekuthengisweni kwezincwadi ezimbalwa!
Ukubizelwa Esenzweni - UMnu Wheaton kungenzeka ukuthi wakwazi ukuxoxisana ngokubizelwa ezenzweni ngaphakathi komlando wakhe waseHuffington Post okhuthaze abantu ukuthi babhukhele uMnu. Wheaton ngamathuba okukhuluma. Ukukhuluma kuyindlela engenisa imali eningi kulabo abanezikhundla zosaziwayo abanjengoMnu. Wheaton.
Imicimbi ye-HuffPo - Kanye neHuffPost Live, iHuffington Post iphinde ikhuthaze futhi ixhase imicimbi eminingi yesifunda neyelizwe. Mhlawumbe uMnu.Wheaton ubengaxoxisana ngekhono lokuba ngumkhulumeli wosaziwayo okhokhelwayo kuleyo micimbi - aze abe nencwadi esayina nalowo nalowo.
Okusemqoka wukuthi ngikholwa ukuthi uMnu. Wheaton ubengaba nayo kalula baxhashazwa inhlangano efana neHuffPo ukushayela ukunakwa okuningi, izethameli, futhi - ekugcineni - imali kuye. Futhi leyo mali ikhokha intela!
Kungani Ngisebenza Mahhala
Ngibhala khulula okuqukethwe kusayithi lami, ngiyabhala khulula okuqukethwe kwamanye amasayithi lapho ngifisa ukuzibandakanya nezilaleli zabo, futhi ngikukhulumela khulula emicimbini enamathemba engifisa ukuhlanganyela nawo. Vele nami ngiyabhala zikhokhwe okuqukethwe kwamakhasimende ethu nami zikhokhwe ukukhuluma kweminye imicimbi. Kwesinye isikhathi, size sikhokhele nomcimbi kazwelonke ukuze nje siwufake encwadini yethu. Ngamanye amagama, kwesinye isikhathi ngikhokha ukuze nje ngifinyelele izethameli kuleyo micimbi!
Ithuba ngalinye lihlolwe ngokususelwa ekutheni singazuza kanjani ekuvezweni nokuthi singaxhumana nobani lapho. Okwethu sebenza mahhala isu libe nenzuzo enkulu kithina. Izindleko zomcimbi owodwa zagcina ngokufeza inkontileka ebesingasoze sayithola ngenye indlela ngophawu lukazwelonke. Lolo hlobo lwaholela kweminye imikhiqizo. Futhi nokuqhubeka.
Ngakho-ke, bengingakhokhelwa amadola angamakhulu ambalwa ngeposi lebhulogi. Noma, ngingavala ibhizinisi elithile nezethameli futhi ngivune amashumi ezinkulungwane noma ngisho namakhulu ezinkulungwane zamaRandi kwizivumelwano. Manje uyazi ukuthi kungani ngisebenzela khulula.
Eqinisweni, angisebenzi kuphela mahhala - Imvamisa ngikhokhela ukusebenza mahhala! Ngokubambisana ne-Dittoe PR, sitshale imali enkulu ekutholeni izithameli ezihlosiwe, ezifanele esifisa ukufinyelela kuzo. Ithimba elinethalente e- I-Dittoe PR ngifaka ithalente lami kulezo zincwadi ukuhlinzeka ngala mathuba. Siyaqhubeka nokuthola izinzuzo zalobo budlelwano - ukwenza umsebenzi wezinkampani kulezo zilaleli ebesingeke sizihlangabeze ngenye indlela.
Ingabe naphakade ukusiza abantu ngaphandle kokukhokhelwa? Wake wacosha udoti wawulahla kudoti? Ngabe uke wanikeza umuntu ongenakhaya imali ngemali? Kungani ungakwenza lokho? Sikhokhela izikhulu zethu zikahulumeni imali enkulu ukugcina imigwaqo yethu ihlanzekile nokusiza labo abaswele. Sisakwenza namanje, ngoba kunozwelo.
Angifuni ukuhlala emhlabeni lapho abantu bangenzi lutho ngaphandle kokuthi banxeshezelwe ngakho. Njengomnikazi webhizinisi, ngiyakuqinisekisa ukuthi ngiyobe ngiphumile ebhizinisini ukube bekuyimo engangiyithatha leyo. Nginabangani bami abaningana abangaboni kahle kanjena, bese ngizwa ukukhungatheka kwabo ukuthi ibhizinisi labo alikhuli. Ngiyakholwa ukusiza abantu kuqala kube yindlela enkulu yokukhulisa ibhizinisi lami. Futhi uma ngisiza umuntu mahhala, bavame ukuthumela ibhizinisi lami kumakhasimende akhokha kakhulu.
Angibuzi isimilo sikaMnu. Wheaton, kodwa ngiyawubuza umbono wokuthi inkampani eyenza inzuzo ixhaphaza umuntu othile ngokumcela ukuthi anikeze ithalente lakhe kwezohwebo. Ngabe uMnu. Wheaton usebenzisa iqiniso lokuthi iHuffington Post inemali yize kunengozi enkulu kanye nokutshala imali abakwenzile ekwakheni umphakathi wabo? Bakhokhile futhi bayaqhubeka nokukhokhela ukugcinwa nokwenyuswa kokushicilelwa kwabo - kungani lokho kunganakwa?
Ngiyafunda I-Slight Edge njengamanje nguJeff Olson futhi ukufanisa kwakhe yilokho komlimi. Tshala uhlangothi, ulilime, bese uthola izinzuzo. Umlimi akakhokhelwa ukutshala imbewu, ukhokhelwa kuphela lapho leyo mbewu ihlwanyelwa ngokucophelela futhi iba nezithelo zomsebenzi wakhe. Ngingakhuthaza wonke umuntu ukuthi atshale imbewu nomaphi lapho kunengqondo khona ... uzoveza isivuno esihle uma usenzile!
Joyina Us on Blab
Mina noKevin Mullett sizokhuluma ngalesi sihloko ngoLwesine ku Blab kumdlalo wethu olandelayo we-Marketing Cage! Ngiyethemba ukuthi ungasijoyina.
Tags: iposi lika-huffingtonokuqukethwe okukhokhelwayookuqukethwe okungakhokhelwai-wheaton
Ungakuhlanganisa Kanjani Ukukhangiswa Kwakho Kokuqukethwe
U-Tema Frank (@temafrank)
Nov 2, 2015 ngo-9: 26 PM
Ngiyavuma. Kukumbhali ukuthi anqume ukuthi babona ukuthi ukuvezwa lokhu kuzobanxephezela isikhathi namandla abo. Akufani nokuthi ababhali abasha abazimele bacelwe ukuthi babhale mahhala (noma ngamasenti ayi-6 / igama, darn eduze kwalo) ngaphandle kokuthola isikweletu sombhali. (Futhi ngigcina labo babhali bekhokhelwa kakhulu!)
Ekugcineni kukhona i-tradeoff yenani futhi lapho lowo layini uzoshintsha ngokuhamba kwesikhathi nangokushicilelwa. Ngisho nangesikhathi ngisebenza njengombhali osebenza ngokuzimela, ngabona ukuthi kunesigaba sabaphathi: lapho umsebenzi uwudina kakhulu futhi nokuhlonishwa kwawo kungaphansi, umholo uyanda. Ngakho-ke ukubhala amabhukwana wezobuchwepheshe kungakhokha kahle kakhulu. Ukubhala inganekwane kuvame ukugcina kungakhokhi lutho kepha kusenganelisa kakhulu kumbhali.
Nov 3, 2015 ngo-12: 19 AM
Ngisengaphikisana nemali kube yisilinganiso senani. Abasebenza ngokuzimela abasebasha abasebenza ngo-6 / cents igama noma badonsa eduze kwalo bakha i-resume futhi bahlonipha umsebenzi wabo. Angibuyisanga mali lapho ngisengumchwepheshe osemncane. Njengoba usebenza kubuciko bakho futhi uba ngcono, uba yigugu ngokwengeziwe. Ngangisebenza ephephandabeni lapho abaklami babephathwa khona kabi futhi benza amaholo amabi, kepha ithuba labafundisa ukuzicija ngobuhlakani babo, ukukhiqiza, nokufunda amapulatifomu ababengakaze baveze wona esikoleni. Lawo makhono abenze bancintisana kakhulu emsebenzini futhi bakwazi ukuthola imisebenzi emangalisayo.
Ukuthi awukhokhelwa namuhla akusho ukuthi awakhi inani futhi uzokhokhelwa lelo nani ngokuhamba kwesikhathi.